आजको भाइटीका भीआइपीहरुले कसरी मनाउँदैछन् ? « News24 : Premium News Channel
आजको भाइटीका भीआइपीहरुले कसरी मनाउँदैछन् ?
काठमाडाैं । नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार हो । तिहारको अन्तिम अर्थात पाँचौ दिन भाइटीका मनाइन्छ । कार्तिक शुक्ल द्धितिया तिथीमा भाइटीका मनाइन्छ । भाइटीकालाई यम द्धितिया पनि भनिन्छ । यस पर्वलाई विधि पूर्वक मनाउँदा मृत्यु समेत नाश हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले भाइटीकालाई मृत्युनाशक भन्ने पनि प्रचलन छ ।
यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौं दिन आज भाइटीका दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य एवम् ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्पराअनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाई मनाइँदैछ । भाइटीकामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई टीका लगाउने गरिन्छ ।
हिन्दू नेपालीको दोश्रो मुख्य चाड तिहारमा राजनीतिक नेतृत्वको व्यस्तता केही कम हुने भएकाले उनीहरु परिवार र कार्यकर्तासँग तिहार मनाउँछन् । प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेताले पारिवारिक जमघट गरेर भाइटीका लगाउँदै छन् ।
कुन नेताले कोसँग भाइटीका लगाउँदै छन् ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी : तिहारको समयमा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री, एवम् मन्त्रीहरूले फुर्सद पाएका छन् । पारिवारिक भेटघाटसँगै आफ्ना दिदीबहिनीबाट तिहारको भाइटीका ग्रहण गर्दैछन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कान्छो भाइ डेगेन्द्र पाण्डेलाई टीका लगाउँदै आएकी छिन् । अर्का भाइ अमेरिकामै बसोबास गर्ने हुनाले यसपटक पनि डेगेन्द्रलाई नै टीका लगाइदिने शीतल निवासले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई बहिनीको हातबाट टीका थाप्ने निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ । झापामा रहेकी बहिनी कौशल्या कोइराला र चितवनमा रहेकी अर्की बहिनी विष्णुकुमारी ढकालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई टीका लगाइदिने कार्यक्रम छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल : नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने बरखीमा छन् । गतवर्ष दिवंगत भएका छोरा प्रकाश दाहालको जूठो नसकिएकाले उनले यसवर्ष टीका थाप्ने छैनन् ।
माधव नेपाल : नेकपाका तेस्रो वरियताका नेता माधव नेपालले बहिनी बसुधा पोखरेलको हातबाट टीका लगाउनेछन् ।
झलनाथ खनाल : त्यस्तै झलनाथ खनालले भने भक्तपुरमा रहेकी जेठी दिदी यशोधादेवी आचार्य र काठमाडौमा रहेकी बहिनी कुसुम खनालको हातबाट शुभ साइतमै टीका थाप्ने कार्यक्रम छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा : नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने बहिनी सुशीला खड्काको हातबाट टीका लगाउने जनाइएको छ ।
रामचन्द्र पौडल : नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडलले भने ठूलीआमाकी छोरी चन्दा ओझाबाट टीका थाप्ने गरेका छन् ।
विमेलेन्द्र निधी : काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले यसपालिको तिहार प्रदेश २ मा मनाउने भएका छन् । उनी भाइटीका ग्रहण गर्न सप्तरीस्थित राजविराजमा दिदी राधादेवी कर्णकहाँ जाने भएका छन् ।
विजयकुमार गच्छदार : काँग्रेसका नवनियुक्त उपसभापति विजयकुमार गच्छदार थारु परम्पराअनुसार तिहार मनाउने भएका छन् । थारु परम्पराअनुसार गच्छदारले भाइटीकाको साइतभन्दा केही समयपछि मात्रै बहिनी (काकाकी छोरी ) को हातबाट तीका लागाउने गच्छदारका सहयोगहरूले बताएका छन् ।
भारी हिमपातका कारण दुई हप्तामै १८ को मृत्यु, केही बेपत्ता
access_time 12:00 pm
बलात्कारका दोषी धर्मगुरु रामरहिमले पत्रकार हत्या गरेकाे पाइएपछि आजीवन कारावासकाे सजायँ
access_time 11:46 am
भियना । अत्यधिक हिमपातका कारण अष्ट्रियामा दुई हप्तामा १८ जनाको मृत्यु भएको छ ।अहिलेसम्म सबैभन्दा पछाडी
सन् २०१७ मा दुई महिला अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा २० वर्षको जेल सजाय सुनाइएका भारतिय
दीपिका पादुकोणले एसिड अट्याकमा आधारीत फिल्म ‘छपाक’को सुटिङ्ग सुरु भएको जानकारी गराएकी छन् । यो